Shirka Golaha Wasiirada oo lagu ansixiyey xubin ka mid ah Guddiga Madaxa-Bannaan ee Dastuurka, loogana hadlay Heshiiska Xaquuqda Carruurta iyo arrimo kale. – Radio Muqdisho
Shirka Golaha Wasiirada oo lagu ansixiyey xubin ka mid ah Guddiga Madaxa-Bannaan ee Dastuurka, loogana hadlay Heshiiska Xaquuqda Carruurta iyo arrimo kale.
Shirkii caadiga ahaa ee Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Dawladda Federaalka ay maanta yeesheen oo uu bilowgii shir-guddoomiyey Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Xukuumada Mudane Mahdi Maxamed Guled (Khadar), halka uu qeybtii danbe uu shir-guddoominayey Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Mudane Xasan Cali Khayre ayaa lagu ansixiyey xubin ka mid ah Guddiga Madaxa Bannaan ee Dastuurka, loogana hadlay arrimaha amniga, maaliyada, heshiiska Xaquuqda Caruurta, shirweynaha amniga iyo horumarka dhaqaalaha iyo arrimo kale.
Ugu horreyn, Wasiir ku xigeenka Amniga Gudaha ayaa ka warbixiyey xaalada guud ee amniga, howlgallada militariga iyo kuwa xasilinta dalka. Sidoo kale waxuu golaha la wadaagay horumarka laga sameeyey hirgelinta qorshaha amniga oo uu sheegay in ay gacanta ku hayaan baaritaano dhab ah oo dad la tuhunsanyahay ah.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka ayaa Golaha Wasiirada uga warbixiyey ahmiyada shirarka waaweyn oo Muqdisho lagu qaban doono 4ta iyo 5ta December 2017. ,Axmed Caynte Madaxa Hay’ada Xiriirka iyo Deeqaha ayaa Golaha siiyey warbixin ku aadan shirka 5ta December ee ah Somali Partnership Forum oo looga hadli doono horumarka dhaqaalaha, mashaariicda la qorsheynayo iyo arrimaha gargaarka oo ay beesha caalamku ka soo qeybgalayaan. Axmed Caynte ayaa sharaxay ahmiyada kulankan iyo sida looga doonayo Dawladda Federaalka inay ku soo bandhigto waxqabadkeeda si caalamka uu u qiimeeyo una dardargeliyo taageeradooda muhiimka ah. Sidoo kale Cabdi Diirshe oo ah Xoghayaha Joogtada ee Wasaarada Qorsheynta ayaa ka warbixiyey sida ay Wasaarada Qorsheynta u diyaarisey mashaariicda dalka oo dhammaantood la waafajiyey baahiyaha dowlada Federaalka iyo Qorshaha Horumarinta Dalka.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka ayaa isna ka warbixiyey shirka guddiga wasiirada ee arrimaha Siyaasada oo uu sheegay in kulankoodii u danbeeyey la isla meel dhigay arrimo badan, waxuuna ka codsaday Omar Dhagey oo ah La Taliyaha Ra’iisul Wasaaraha inuu warbixin dheeraad ah siiyo golaha wasiirada. Omar ayaa sheegay in shaxdii iyo nidaamkii Federaaleynta dalka, dib-u-eegista dastuurka iyo hirgelinta doorashooyinka la diyaariyey oo ay meel fiican marayaan. Ra’iisul Wasaare ku xigeenka ayaa hoosta ka xariiqay ahmiyada dejinta qorshaha siyaasada dalka ee shacabka loogu horseedayo qabsoomida doorashooyin hal cod iyo hal shaqsi ah 2020ka.
Wasiirka Haweenka & Xaquuqul Insaanka, Marwo Deqa Yasin Haji Yusuf ayaa golaha siiyey warbixin dhameystiran oo ku aadan wadatashi iyo daraasad ay ka soo sameynayeen Dowlad Goboleedyada iyo G/Benadir oo carruurta Soomaaliyeed lagu xog-wareysanayey xaaladooda dhabta ah, caqabadaha jira iyo fursadaha si kor loogu qaado adeegyada aasaasiga ah ee carruurta iyo kor u qaadista xaquuqda carruurta. Wasiir Deeqa ayaa sheegtay in heshiiskii Xaquuqda Carruurta ee Soomaaliya ay saxiixday 2015kii na-looga baahnaa inaan warbixin dhameystiran gudbino labo sano gudahood, tanoo ah sababta daraasada, wadatashiga iyo xog-ururinta loo sameeyey.
Ugu danbeyntii Wasiirka Arrimaha Dibedda Yusuf Garaad ayaa ka warbixiyey booqasho uu ku tagey dalka Mareykanka oo uu casuumaad ka helay Wasiirka Arrimaha Dibedda Mareykanka oo laga wada hadlay xiriirka Africa iyo US oo ay 37 Wasiir Arrimo dibadeed ee dalalka Africa ay halkaas ku sugnaayeen. Wasiir Yusuf ayaa sheegey inuu la kulmay Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Rwanda oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal, iyadoo Rwanda ay dhowaan Soomaaliya soo gaarsiisey daawooyin caafimaad oo 2 Milyan oo dollar lagu qiyaasay si bukaanka Isbitaalada ku jira loogu daaweeyo. Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa sheegey ahmiyada dalka Rwanda oo Soomaaliya ay wax badan ka baran karto bacdamaa ay duruufo adag ka soo gudubtay, maantana kor u qaaday dhaqaalaheeda.
Wasiirka Warfaafinta oo la kulmay Dhalinyarada Adeega dhiig bixiyaasha ee ka howlgala Gobolka Banaadir+Sawiro
Ra’iisul Wasaare Xasan Khayre oo maanta dhagax dhigay Xabsiga dhexe ee degmada Baydhabo